Afထgy Platform – Waxbarasho Xad La'aan Ah
Waxaa ku guulaysanay in an barteena Waxbarasho ku
tababarno in ka badan 1000+ arday oo ka faa’iday
aqoonta kala duwan ee laga baxiyo bartan.
Waxbarasho Xad La’aan Ah
Kororso Xirfad Cusub
Baro xirfado cusub la Xiriirta Waxa danaynayso adigoo gurigaadi jooga.
Kabaro Culuumta kala duwan Maclimiin Aqoon Dheeri u leh Waxay kusoo Gudbinayaan.
Casharo oo marwalba la cusboonay siinayo -Update-ah oo tayo sare leh, la socdo kadis iyo shaqooyin.
Hel marwalba dhamayso course shahaado cadaynaysay xirfada baratay.
Hadafkeena waa in ay helan ardaydeena waxbarasho an xad lahayn lehna tayo iyagoo nagala socon karo meel walba ay jogan iyo xili walba.
Ilyas Ibrahim Mohamed, Chairman and Co-Founder
Si Aad ugu mid noqoto Ardayda afoogy raac Talaaboyinkani Hoose
Waxa ka helee Afoogy Barayaal Khibrad LehCasharo Tayo sare LehCasharo Habaysan
Talabada koowaad aa racayso waa in aa iska diwaangaliso Afoogy Platform adigo ka samaysanaya Username ama Account adigoo taabanaya Halkaani.
Kadib iska dhiib ama iska bixi lacagta khidmada ee afoogy oo $5/bishii ama $10/3dii bil hal mar waxa laga cafin hal bil, Takhasusyada iyo Koorsooyinka idin hayno Halkaani ka fiiri
Fadlan waxaa inoo soo gudbisa adigo nagala soo hadlayo talefonada ama emailada Halkani ku xusan, adigo so diraya 3-dan Xog ee hoos ku xasan:
1- Magaca isku diiwangalisay ama Emailkaadi.
2- Numberkaa khidmada kaso tuurtay.
3- Koorsada rabtid.
Maxay Ardaydeena Naga Dhaheen!
Alxamdulilaah Alle wuu ii fududeeyey ustaad casharadii waan wada fiirsaday wax badan waan ka fahmay waa Alle mahadiisa Alle haka ajarsiyo jazaaka laah masha Allah ustaad Aduun iyo Aakhiro liibaan danbigadana Alle ha dhaafo mahadsanid kun iyo kow jeer ustaad thank you
الحمد للله رب العالمين Marka hore rabbaa mahad iska leh iisuurto geliyey inaan khatimo cooursekan ms word . Marka labaadna aad ayaan ugu mahadcelinayaa macallinkayga ustaad salmaan maadow oo runtii aan la yaabay qaabka wanaagsan ee uu casharrada noosoo gaarsiiyey Ustaad alla hakaa abaalmariyo miizaanka xasanaadkana hakuugu daro insha allh marwalbana khayr ayaan kuu rajaynayaa macallin .
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan dhameysto course of video Editing Premier pro and Hitflim express waxaan si qaas ah ugu mahad celinayaa alle kasakow Ustaad:Salman Madow. Ustaad waad mahadsantahay Sida wanaagsan ood noogu dadaashay Waxaan qaatay Certificate of Premier pro
waxaan ahay ardayad ka mid ah ardayda AFOOGY, waxaan ka bartay video editing. Waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa allah subxaanahu watacaalaa ii fududeeyey in aan ka mid noqdo ardayda AFOOGY, marka labaad waxaad mahad balaaran u dirayaa macali SALMAAN MAADOW iyo akhyaarta la shageysa oo mar walba u heelan siday ardaydooda u qancin lahaayeen, runtii cashirada markii koowaad caqabado ayaan kala kulmay , caqabad walba si diiran oo qurux badan ayey iigu xalinaayeen macalinka iyo akhyaarta kale ee la shaqeeya.
waxaa alle mahadiis ah inaan helay shabakaddaan Afoogy muddo sanad kahor ah waxaan lasocday bilowgii shabakaddaan Afoogy waxay ii rumaysay riyadaydii ahayd mar un inaan barto xirfadda sawirada hagaajinta iyo filim samaynta maanta waxaan hayaa guul wayn Waxaan halkaan uga mahad celinayaa macalin #Salmaan maadow